ကံကြမ္မာ - WINX SAGA ကအသက်အရွယ် - NETFLIX ရဲ့ဆယ်ကျော်သက်ဒရာမာကြယ်တွေဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ။ - သတင်း
Netflix ၏ဆယ်ကျော်သက်ဒရာမာသစ်၏ကံကြမ္မာမှာ Winx Saga သည်ဟောင်းနွမ်းနေပြီဖြစ်သည်
Netflix သည်ဆယ်ကျော်သက်ဒရာမာအသစ်တစ်ခုကိုထုတ်လွှင့်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ နတ်သမီးပုံပြင်များစွာသည်သူတို့၏စွမ်းရည်များအကြောင်းသင်ယူရန်မှော်ဘော်ဒါဆောင်ကျောင်းသို့တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ဘယ်ရယ်စရာကနည်းနည်းရယ်စရာကောင်းလိမ့်မလဲ၊ ဒါပေမယ့်ငါလူတွေဟယ်ရီပေါ်တာကိုစော်ကားတာသေချာတယ်ဟုတ်လား? ဤအရာသည်သင်သိစေရန် bitchy drama၊ အရှုပ်တော်ပုံ၊ မုသားနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်းမာမှုတို့၏အကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားရစေပြီး၊ ဒါပေမယ့်နောက်တဖန် Netflix ကဖြစ်ပါတယ် သက်ကြီးရွယ်အိုများစွာကိုဆယ်ကျော်သက်များကဏ္playတွင်သရုပ်ဆောင်ရန်။ ဒီတော့ကံကြမ္မာအားလုံးရဲ့သက်တမ်းကဘာလဲ: စစ်မှန်သောဘဝ၌ Winx Saga?
စီးရီးများတွင်သူတို့အားလုံးတက်ရောက်ရန် Fairies အတွက် Alfea ကောလိပ် ။ Bloom မှလွဲ၍ အက္ခရာများမှာဗြိတိသျှဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်ဗြိတိန်ကောလိပ်တွင်နေထိုင်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည်၊ ထို့ကြောင့်အသက် ၁၆ နှစ်မှ ၁၈ နှစ်ထိရှိသည်။ ဤနေရာတွင်ဆယ်ကျော်သက်များ၏အပြည့်အ ၀ သရုပ်ဆောင်မှုနှင့်သူတို့ဘဝအသက်တာတွင်အသက်မည်မျှရှိသည်ကိုခန့်မှန်းနိုင်သည်။
အဘိဂဲလ Cowen - Bloom
ဦး ဆောင်သူဖြစ်သော Abigail Cowen သည်အမေရိကန်မီးသတ်သမား Bloom ဖြစ်ပြီးအသက် ၂၂ နှစ်သာရှိသေးသည်။ သူမသည် ၁၉၉၈ ခုနှစ်မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့တွင်ဖလော်ရီဒါတွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူ့ကိုသူမကို Netflix ရှိ Chilling Adventures of Sabrina မှသိနိုင်သည်။
ဒန်နီဂရစ်ဖင် - Sky
ကျောင်း၏နှလုံးခုန်နှုန်းကို Sky ကို Danny Griffin ကကစားသည်။ သူသည် ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင်လန်ဒန်၌မွေးဖွားခဲ့ပြီး Gentleman တွင် Aslan ကစားခြင်းကြောင့်လူသိအများဆုံးဖြစ်သည်။
ဟန္နဗန် der Westhuysen - Stella
အဘယ်ကြောင့် Duke unc ထက်ထက်သာ။ ကောင်း၏
Shady ဆရာ Stella သည်လန်ဒန်မင်းသမီး Hannah van der Westhuysen မှပါဝင်သည်။ သူမသည် ၁၉၉၅ ခုနှစ်သြဂုတ်လ ၂၆ ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။
isha လိရှဲ Applebaum - Musa
Musa ကို (အမည်မှသဲလွန်စ) ကသူမရဲ့ဂီတကိုတစ်ချိန်လုံးနားထောင်ပေးတဲ့ Elisha Applebaum ကတီးသည်။ Elisha ကို ၁၉၉၅ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီးအသက် ၂၅ နှစ်သာရှိခဲ့သည်။
အဖိုးတန် Mustapha- Aisha
ရေကူးခြင်းကိုနှစ်သက်သောရေနတ်သမီး Aisha ကို Precious Mustapha မှကစားသည်။ သူမသည်တကယ့်ဘဝ၌လန်ဒန် Hackney မှ ၂၃ နှစ်အရွယ်မင်းသမီးတစ်ပါးဖြစ်သည်။
Eliot ဆား - Terra
Terra ဟာကံကြမ္မာအတွက် Winx Saga ရဲ့ဆယ်ကျော်သက်တွေထဲမှာအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရလို့သင်အံ့သြသွားပါလိမ့်မယ်။ အရည်ရွှမ်းသော (တူညီသော) ကိုသာချစ်သောကမ္ဘာနတ်သမီးသည် ၁၉၉၄ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သော Eliot Salt မှဖြစ်သည်။ သင်ကသူမကိုသာမန်လူများထံမှအသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည်။
Freddie Thorp သည်ကံကြမ္မာအထူးကုဆရာ ၀ န်ဖြစ်သောရစ်ဗ်ကို ၀ တ်ဆင်သည်။ တကယ့်ဘ ၀ တွင်မင်းသားသည် ၂၆ နှစ်ဖြစ်သည်။ သူသည် Harlan Coben ဝတ္ထုနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သော Netflix ဒရာမာ Safe - မှသင်သူ့ကိုအသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည်။
တစ်ဦးမိန်းကလေးများ Boob ဖမ်းပြီးဖို့ဘယ်လို
ယာကုပ်အမျိုးကို Dudman - ဆမ်
Terra ၏အစ်ကိုလည်းဖြစ်၊ အက်မီအတွက် Fairea ကောလိပ်ရှိကျောင်းသားတစ် ဦး ကိုလည်း ၂၃ နှစ်အရွယ် Jacob Dudman ကကစားသည်။ သငျသညျ Harlan Coben ရဲ့ဝတ္ထု The Stranger ၏ Netflix ရဲ့လိုက်လျောညီထွေအတွက်သောမတ်စ်စျေးအဖြစ်သူ့ကိုအသိအမှတ်မပြုပေလိမ့်မည်။
Beatrix သည် Alfea နှင့်ကျောင်းအုပ်ဆရာအဖြစ်စွဲလမ်းသူအဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုမိတ်ဆက်သူကို Sadie Soverall မှပါဝင်သည်။ Sadie သည်ကံကြမ္မာ၏အငယ်ဆုံးဖြစ်သည်။ Winx Saga သရုပ်ဆောင်သည်။ သူမသည်အသက် ၁၉ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး ၂၀၀၂ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ ၁၇ ရက်နေ့တွင်မွေးနေ့ဖြစ်သည်။
Theo ဂရေဟမ် - Dane
သငျသညျလူတို့သည်ငါ့စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ် whitehall ပေါက်
Dane ကို ၂၃ နှစ်အရွယ် Theo Graham မှကစားသည်။ သူသည် ၁၉၉၇ ခုနှစ်ဇွန်လ ၂၀ ရက်တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီး Hollyoaks ရှိ Hunter McQueen အဖြစ်လူသိများသည်။
ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့်အချိန်နှင့်ကံကြမ္မာ - Winx Saga ကို Netflix တွင်ရနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးပေါ် Netflix သတင်းများ၊ ဉာဏ်စမ်းပဟေ,ိများ၊ အစက်အပြောက်နှင့်မှတ်စုများအတွက် Facebook ပေါ်မှာ Netflix ၏သန့်ရှင်းသောဘုရားကျောင်းလိုပဲ။
• ဤအရာများသည် Netflix ရှိ Winx Saga Fate ၏စစ်မှန်သောဘဝရိုက်ကူးရာနေရာများဖြစ်သည်
• ဤသည် Netflix အပေါ် Bridgerton ၏သွန်းအစစ်အမှန်ဘဝ၌ရှိကြ၏ဘယ်လောက်ဟောင်းဖြစ်ပါသည်